Somaliland: Dowladda oo Mamnuucday in lagu Safro Nooc ka mid ah Gadiidka - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Dowladda oo Mamnuucday in lagu Safro Nooc ka mid ah Gadiidka
Somaliland: Dowladda oo Mamnuucday in lagu Safro Nooc ka mid ah Gadiidka
Xukuumadda Somaliland ayaa ka mamnuucday gadiidka yar yar ee loo yaqaan VITZ “Dukhaanka” in ay u kala gooshaan gobollada iyo dagmooyinka dalka, kadib markii uu batay shilkoodu. Sidoo kale gadiidka loo yaqaan Noohada ayaa lagu amray in aanay qaadi karin rakaab ka badan 7 qof, waxaana sidaasi lagu sheegay War-saxafadeed kasoo baxay xafiiska Wasaaradda.
“Markaan Arkay: Qodobka 20aad iyo 42 aad ee xeerka wadista gadiidka (Xeer L/r/56/2013)
Markaan arkay :qodobka 25 aad farqadiisa 8 aad ee xeer nidaamiyaha dhismaha wasaaradaha iyo ha’ayaddaha xukuumadda (Xeer l/r 01.2018) oo tilmaamaya wasaaradda gadiidka iyo horumarinta jidadka inay maamusho adeegyada isu socodka dadka iyo alaabta islamarkaana xaqiijiso isku gudubka badeecadaha iyo adeegyada xamuulka ee waddanka.
Markaan helay: warbixin ciidanka nabadgelyada wadooyinka oo tilmaamaysa in gadiidka yaryar ee loo yaqaan (VITS) ee qaada rakaabka dadweynaha u kala goosha degmooyinka iyo gobolada dalku ay keenaan shilalka ugu badan madaama ay wadayaashodu yihiin kuwo aan xirfad lahayn sida oo kale aan haysan ruqsada wadida gadiidka dadweynaha.
Markaan tixgeliyey: baahida weyn ee loo qabo badbaadinta nafta iyo maalka dadka taasi oo lagama maarman ka dhigaysa in lakala nidaamiyo gadiidka xamuulka qaada ee ukala goosha magaaloyinka dalka
In wixii ka yar baabuurta loo yaqaan Toyoto Noah aanay qaadi Karin rakaab u kala gooshaya gobolada dalka
In gawaadhida Noah-da aan loo ogolayn in ay qaadan rakaab ka badan 7qof marka laga reebo darawalka.
Ciddii u hoggaansami wayda awaamirta wareegtadan , waxa lagu ganaaxi doona si waafaqsan xeerka wadda marista gadiidka.”
Somaliland: Dawladda Ingiriiska Oo Cusboonaysay Digniinta Amni Ee Ay U Dirayso Muwaadiniinteeda Ku Sugan Somaliland.
Somaliland: Dr Gaboose oo cisbitaal cusub iyo jaamacad caafimaadka laga barto ka furey Hargeysa